❤️Indlu Enhle enethala elingekude nolwandle - I-Airbnb
❤️Indlu Enhle enethala elingekude nolwandle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Claire
U-Claire unokuphawula okungu-47 kwezinye izindawo.
Indlu yethu enhle ye-Landaise, njengentsha, izokwenza nifune ukuhlala nobabili ngaphakathi futhi ngesikhathi esifanayo nifune ukuphuma, nihogele umoya wasolwandle noma umane nizwe umsindo wamagagasi.
Le ndlu isendaweni ekahle, iyikhilomitha elingu-1 ukusuka ogwini nasenkabeni yedolobha lolwandle. Ungafika lapho ngemizuzu eyi-10 ngezinyawo noma uthathe indlela yamabhayisikili edlula phambi kwendlu.
Ngeke ufune lutho kuleli khaya elingu-60 m², ngakho ungabe usalinda, bhukha ngokushesha!
Asihlinzeki ngamashidi noma amathawula futhi indawo yokungena izimele.
Kuzokuthatha isikhathi esingaphezu kweviki ukuze uthole futhi uhambe kulo mnyango wesi-2 ngobukhulu e-France.
isanda kulungiswa. Amakamelo okulala amabili nekhishi elihlome ngokuphelele, elinomshini wokuwasha izitsha nomshini wokuwasha, livulekele igumbi lokuhlala ukuze likuvumele ukuthi ulijabulele ngokugcwele iholide lakho.
Ukungapheli kwamabhishi ama-Lands amade nobuhle bawo, kuzokwenza ukhohlwe unyaka owodwa ongapheli we-metro, umsebenzi, ukulala; Nakhu Ukuphumula, Kuyashisa kanye Nebhayisikili ...
Ngakho masinyane sebenzisa lezi zikhathi zokuphumula eLandes!
Indlu itholakala endaweni ethule kakhulu 1 km ukusuka ogwini eduze nje kwendlela yomjikelezo omuhle futhi ngaphambi nje kolwandle lwamanje kanye nalolu lwandle oluhle kakhulu oluholela olwandle.
Kuyinjabulo ukuthi siyakwamukela endlini yethu enhle phakathi kwama-moor ethu asendle.
Sizotholakala ngocingo uma kudingeka.